Ma caadi baa in mishiinka alxanka laysarka ee birta ah lagu shubo qaboojiyaha biyaha oo aan biyo lahayn?
Xakamaynta heerkulka saxda ah ee Nidaamyada Laser-ka iyo Codsiyada Warshadaha Ilaa 2002
Qaboojiyaha Fiber Laser
Qaboojiyaha Laser Co2
Ultrafast Laser & Chiller Uv Laser
Qaboojiyaha Habka Warshadaha
S & Blog
Guriga > S & Blog
Marka isticmaalayaashu helaan mishiinka alxanka laysarka birta ah ee qaboojiyaha biyaha laysarka, waxay ogaan doonaan qaboojiyaha biyaha laysarka wax biyo ah kuma laha gudaha. Taasi waa sababta oo ah biyaha ayaa la daadiyaa ka hor dhalmada. Ka dib markii rakibidda la dhammeeyo, isticmaalayaashu waa inay ku daraan biyo nadiif ah ama biyo nadiif ah oo nadiif ah gudaha. Waa mamnuuc in qaboojiyaha lagu shubo biyo la'aan. Haddii kale, qaboojiyaha biyaha laysarka ayaa dhaawacmi doona.
Horumarka 18-sano ka dib, waxaan dhisnay nidaam tayada badeecada oo adag waxaanan bixinaa adeeg iib ka dib oo si wanaagsan loo aasaasay. Waxaan bixinaa in ka badan 90 nooc oo qaboojiyaha biyaha caadiga ah iyo 120 moodooyinka qaboojiyaha biyaha si wax looga beddelo. Awoodda qaboojinta ee u dhaxaysa 0.6KW ilaa 30KW, qaboojiyeyaashayada biyaha ayaa lagu dabaqi karaa in lagu qaboojiyo ilo kala duwan oo laysarka, mashiinnada wax lagu sameeyo ee laser, mashiinnada CNC, qalabka caafimaadka, qalabka shaybaadhka iyo wixii la mid ah.
qaybta qaboojiyaha warshadaha Kuuriya bir fiber laser alxanka mashiinka qaboojiyaha mashiinka qaboojiyaha ee alxanka laysarka
KA HOR Maxaa dhacaya haddii wareegtada biyaha qaboojiyaha ee warshadaha ay noqdaan kuwo aad u kulul?
Waa maxay cimri dhererka guud ee isha laser fiber? XIGTA
S&A Chiller waxaa la aasaasay 2002 iyadoo leh 20 sano oo waayo-aragnimo qaboojiye ah, waxaana hadda loo aqoonsan yahay hormuudka tignoolajiyada qaboojinta iyo lammaane lagu kalsoonaan karo ee warshadaha laysarka.
XIDHIIDHYADA DEGDEGGA AH
Luqadda Khariidadda goobta
Xuquuqda daabacaadda © 2021 S&A qaboojiye - Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin.